တရုတ်နိုင်ငံအတွက် ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲစိတ်ကူးအိပ်မက်များအား ထုဆစ်ပုံဖော်ခြင်း - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံအတွက် ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲစိတ်ကူးအိပ်မက်များအား ထုဆစ်ပုံဖော်ခြင်း
ပေကျင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်းမြို့နှင့် ကျန်းကျားခို မြို့များတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများကျင်းပခွင့် ရရှိခဲ့သည်မှာ ရက်ပေါင်း ၂,၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ အားကစားကွင်းများ သည် ဆောင်းရာသီ အားကစားပြိုင်ပွဲများကို စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကတိကဝတ်ကို ဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကတိကဝတ်များ၏ နောက်ကွယ်တွင်လူများစွာ၏ အိပ်မက်များနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများရှိနေသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Building Winter Olympics dreams for China
BEIJING, Nov. 1 (Xinhua) — Over 2,000 days have passed since Beijing and Zhangjiakou won the bid for the 2022 Winter Olympics. World-class sports venues have sprung up to fulfill China’s commitment to host the Winter Games as scheduled. Behind the commitment are the dreams and efforts of many. #GLOBALink
ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တရုတ် နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပြပွဲ ဖွင့်လှစ်
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့ အတူပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ဗြိတိန်တာဝန်ရှိသူပြောကြား